My Dear Diary » . မြ ရဲ့ သင်ပုန်း ၁၁-၁၂-၂၀၁၅	10
မြစပဲရိုး says: အာဏာရှင် က ကိုယ့် ဘဝ ကို မထိလို့ ဒီလို ပြောတယ်လို့ မပြောနဲ့။
kai says: .. သူ့အမုန်းတော်ကြီးကို.. ကျေးဇူးတင်ပြလိုက်လို့… ဇီဇီနှင့် သူ၏မိတ်ဆွေများ.. စိတ်ဆိုးတော်မူသွားသလားမသိ…
Alinsett @ Maung Thura says: ပုဒ်မ ၅၉(စ) ကို ယာယီဖယ်ထားမည်ဟု သာ အတည်ဖြစ်ပြီး
ကျနော်ကတော့…. ထ က ပါမည်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ရွာကို စိတ်ဆိုးတာ တော့ ဟုတ်ပါဘူး မဟုတ်လား ဇီကလေးရာ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဘယ်လို အကျိုးဆက်ကောင်းကောင်းပဲ လာလာ…
In Only Suu, I trust. အမေ ရှိနေသေးးလို့ ဒွေးဒေါ် ကို လွမ်းဖို့ စိတ်ကူးးကို မရှိ..
မြစပဲရိုး says: အကယ်၍များ
E.မြောက်မြောက် says: ကျွဲမြိ်းတိုစရာလားဗျာ
မြစပဲရိုး says: မြောက်မြီးတို ဆိုကြည့်ကောင်းမယ် မထင်ပါ မျောက်ကလေးရ။ :-)))
Mike says: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေး၊ ဦးရွှေမန်း၏ အဖြေ
Mike says: ကျမလေ အင်မတန်မှ စွှန့်လွှတ် အနစ်နာခံပါတယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြောတဲ့လူတွေကို ခပ်ကြောက်ကြောက်ပဲ။